🥇 ▷ Oppo R17 horeyba saf ugu jirtay: miyay noqon doontaa kan ugu horreeyay adduunka ee leh laba-lambar lambar R? (sawir) (cusboonaysiin: isbeddel ka yimid TEENA) ✅
Oppo R17 horeyba saf ugu jirtay: miyay noqon doontaa kan ugu horreeyay adduunka ee leh laba-lambar lambar R? (sawir) (cusboonaysiin: isbeddel ka yimid TEENA)
Xitaa maaha waqtigii la arki lahaa (dibna loo eegi lahaa) Oppo R15, oo durba u muuqda kan safka ka dambeeya, Oppo R17. In kasta oo aan weli wax badan laga ogayn tilmaamaha farsamo ee ay u gaarka ah, haddana macluumaad muhiim ah oo ku saabsan aaladda iyo aaladda ayaa ku soo baxday shabakadda cadadka RAM taasi waa dhameystiri kartaa.
Daawashada sawirkii ugu horreeyay ee lagu muujiyo daaradda, waad arki kartaa taas, inta lagu gudajiray munaasabadda Oppo-loo yaqaan ee Shiinaha, dhibco dhibco ifaya oo la xiriira R17 ayaa sidoo kale soo muuqda. Xiriirka ka dhexeeya guuleystayaasha Oppo R15 iyo R15 Pro waa mid deg deg ah, in kasta oo aannan fileynin masaafo waqti sidan oo kale ah xir.
Waxaa jira muuqaalka labaad ee rugta waxay loola jeedaa, si kastaba ha noqotee, inay wararka qaar ku faafto shabaqa taas oo Oppo e ah Waan noolahay iyagu waxay noqon doonaan soo-saareyaashii ugu horreeyay adduunka ee soo saara mid casriga ah oo leh 10 GB oo RAM ah. Annagu garan mayno in tirada duuban ee RAM lagu rakibi doono Oppo R17 ama R17 Pro, ama ku-guuleystaha barnaamijka ‘Oppo Find X’.
Macluumaadka ilaa iyo hada la hayo ayaa muujinaya in aaladdan jabisa rikoorada ay tahay in ay timaado kahor dhamaadka sanadka. Xaqiiqdi waanu ku soo laaban doonnaa si aannu idiinkala socodsiinno sida ugu dhakhsaha badan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan labada arrimoodba.
Suurtagalnimada jiritaanka qofka guuleysta ee Oppo R15, malaha R17, ayaa qaadanaya macno badan iyo caqli badan Thanks to macluumaadka cusub ee ku soo daatay aaladda.
Waxay ka yimaadeen marinka Oppo R17 ka TEENA, wakaaladda isgaarsiinta Shiinaha, waxayna soo bandhigayaan baaxadda taleefanka casriga ee ay tahay inay la xiriiraan 156.7 x 74 x 7.99 mm, awooda bateriga oo noqon kara 3,415 mAh iyo sawirka shaashadda waa inuu ka socdaa 6.3 inji.
Waxaan kusoo laaban doonnaa si aan kuugu cusboonaysiinno isla markaaba aan faahfaahin dheeraad ah ka helno xaashiyaha farsamada Oppo R17.